Hake fillets negariki uye paprika dhishi risinganetsi | Kicheni Mapepa
Hake fillets negariki uye paprika
Montse Morote | | Spanish Cuisine
Hake fillets negariki uye paprika. Hove ine hwema hunyoro hunonyanya kufarirwa. Kugadzirira dhishi iri ndashandisa dzimwe chiuno chehake dzakachena nemapfupa, unogona kushandisa imwe chikamu cheayo. Hake ine nyama yakasimba uye yakadzika kwazvo mumafuta.
Iyi recipe kubva Loin ye hake negariki uye paprika zviri nyore kwazvo kugadzirira uye zvishoma zvichiperekedzwa nembatatisi, chikafu chakazara kwazvo uye chakanaka chine mhedzisiro yakanaka.
4 hake hokwe
1 tablespoon inotapira kana inopisa paprika
Isu tinosvuura uye tinocheka mbatatisi kuita matete matete, isu zvakare tinocheka gariki kuita matete matete.
Isu tinoisa casserole nemvura uye munyu munyu, painotanga kubika tinowedzera mbatatisi dzakachekwa. Isu tinoirega ichibika kusvikira vashaya zvishoma.
Isu tinoisa munyu uye mhiripiri chiuno chake ndokuisa pamusoro pembatatisi, tichivhara torega mbatatisi dzipedze kubika uye hake yakabikwa, haifanirwe kunge yakareba sezvo ichida nguva shoma.
Kana mbatatisi uye hake zvikagadzirira, tinozvitora ndokudonha zvakanaka.
Isu tinoisa mbatatisi mundiro uye pamusoro pezvidimbu zve hake, zvinogona zvakare kuiswa pamahwendefa uye nekudaro zvinopihwa kumuenzi wega wega.
Isu tinoisa pani yekutsvaira ine jet yakanaka yemafuta emuorivhi, tinowedzera gariki yakatemwa kuita matete matete.
Kana gariki yatsvukuruka, wedzera iyo chena waini, rega ibike kwemaminetsi matanhatu kusvika kumaminetsi manomwe, sanganisa doro racho, isa paprika inotapira kana inonaka, ichikurudzira kuti isatsva nekunyungudutsa paprika zvakanaka.
Tinowedzera muto mutsva pamusoro peake uye mbatatisi. Isu tinoshumira kupisa zvakanyanya.
Uye ichave yakagadzirira kudya !!
Inonaka uye ine muto.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Mapepa ePasi » Spanish Cuisine » Hake fillets negariki uye paprika
Bhinzi dzegirinhi dzine piquillo mhiripiri uye zai rakabikwa